Забур 143 CARS - Nnwom 143 ASCB
1Ao Awurade, tie me mpaeɛbɔ,
tie me nkotosrɛ;
wɔ wo nokorɛdie ne tenenee mu
2Mfa wʼakoa nkɔ atemmuo mu,
na ɔteasefoɔ biara ntene wɔ wʼanim.
3Ɔtamfoɔ no taa me,
ɔma me tena esum mu
te sɛ wɔn a wɔawuwu dadaada.
4Ɛno enti me honhom atɔ piti wɔ me mu;
na mʼakoma aba mu abu wɔ me mu.
medwendwene wo nnwuma
ne deɛ wo nsa ayɛ nyinaa ho.
6Mepagya me nsa kyerɛ wo;
wo ho sukɔm de me kra sɛ asase wesee.
7Ao Awurade, gye me so ntɛm;
Mfa wʼanim nhinta me
anyɛ saa a, mɛyɛ sɛ wɔn a wɔkɔ amena mu no.
8Ma mente wʼadɔeɛ a ɛnsa da no ho asɛm daa anɔpa,
Kyerɛ me ɛkwan a memfa so,
9Ao Awurade gye me firi mʼatamfoɔ nsam,
na wo mu na mede me ho hinta.
10Kyerɛ me na menyɛ wʼapɛdeɛ,
na wo ne me Onyankopɔn;
nni me ɛkan wɔ asase tamaa so.
11Ao Awurade, wo din enti, kyɛe me nkwa so;
wo tenenee mu, yi me firi ɔhaw mu.
12Wɔ wʼadɔeɛ a ɛnsa da no mu, yi mʼatamfoɔ hɔ;
na sɛe wɔn a wɔkyiri me nyinaa,
na meyɛ wo ɔsomfoɔ.
ASCB : Nnwom 143